WordPress - လွယ်ကူသောအဆင့် ၃ ဆင့်ဖြင့်အိမ်စာမျက်နှာတစ်ခုတည်ဆောက်ပါ Martech Zone
WordPress - လွယ်ကူသောအဆင့် ၃ ဆင့်ဖြင့် Home Page တစ်ခုတည်ဆောက်ပါ
စနေနေ့, ဇန်နဝါရီလ 13, 2007 ကြာသပတေးနေ့, ဇူလိုင်လ 9, 2015 Douglas Karr
ငါရှိခဲ့သူကိုမိတ်ဆွေတစ် ဦး အဘို့အ site တစ်ခုအပေါ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည် WordPress သို့သော်သူသည်နောက်ဆုံးပေါ်ဘလော့ဂ်များကို အသုံးပြု၍ အိမ်သုံးစာမျက်နှာထက်ရိုးရှင်းသောအိမ်စာမျက်နှာတစ်ခုလိုချင်ခဲ့သည်။
အကယ်၍ သင်၏ဘလော့ဂ်ကို site တစ်ခုလုံးထက်သင့် site ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လိုပါက၎င်းသည်တကယ်အသုံးဝင်သည်။ WordPress ကိုအခြေခံအားဖြင့်သင်ကအသုံးပြုနိုင်သည် CMS။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ 'Easy Steps' ကိုကျွန်တော်အာရုံစိုက်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်သင်ဟာ WordPress ကိုအသုံးချပြီးအဆင့်မြင့် developer တစ်ယောက်ဖြစ်ရင်ငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးပါ။ 🙂
သင်၏ Page Template (page.php) ကို home.php ဟုခေါ်သောဖိုင်အသစ်သို့ကူးယူပြီး၎င်းကိုသင့်ဆောင်ပုဒ်လမ်းညွှန်တွင်ထည့်ပါ။ ဤသည် WordPress ၏ထောက်ခံအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှာဖွေလိမ့်မည် နေအိမ် တည်ရှိလျှင်ပထမ။
အမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုလုပ်ပြီး Home Page ဟုခေါ်ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါကုဒ်တွင်သင်လိုအပ်လိမ့်မည်အမျိုးအစားနံပါတ်သတိရပါ။
overwrite ကွင်းဆက် home.php မှာအောက်ကကုဒ်ပါ။ သင်၏မူလစာမျက်နှာစာမျက်နှာဟုခေါ်သောသင်၏အမျိုးအစားအသစ်သို့တင်ထားသောအကြောင်းအရာမှအပအခြားအခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်၎င်းအားစစ်ထုတ်သည်။ အောက်ပါ Category ID ကို cat = 1 ကြေညာချက်တွင်အစားထိုးပါ။ ပိုမိုသင့်လျော်သောကြောင့်ပို့စ်များကို sort ပြုလုပ်ရန်လည်းကျွန်ုပ်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ဒါပဲ! သင်ပြီးပြီ အကယ်၍ သင်သည်ထိုစာမျက်နှာပေါ်ရှိဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုသာလိုချင်ပါက၊ ပင်မစာမျက်နှာကိုအသစ်ပြောင်းလိုသည့်အခါတိုင်းတင်စာတစ်စောင်တည်းသာရေးသား။ အသစ်ပြောင်းပါ။ Voila!
"> ဤစာမျက်နှာ၏ကျန်အပိုင်းများကိုဖတ်ပါ» '); ?>  > strong> Pages: ',' ',' နံပါတ် '); ?>
အကယ်၍ သင်သည်ပင်မစာမျက်နှာတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ကူညီရန်အတွက်ပလပ်ဂင်တစ်ခုလိုပါကသင်အသုံးပြုနိုင်သည် ဒီတစ်ခု.
Tags: ပင်မစာမျက်နှာWordPresswordpress အိမ်စာမျက်နှာwordpress ကွင်းဆက်
Microsoft က Outlook 2007 နှင့်အတူနောက်ပြန်ခြေလှမ်းတက်
ဇန်နဝါရီလ 13 ရက် 2007 ခုနှစ် ညနေ 11 နာရီ 03 မိနစ်
Nokia မှာ ရှိတဲ့ ပင်မစာမျက်နှာကို flash သုံးပြီး ဖန်တီးချင်တယ်…။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ စိတ်ကူးရှိလား။
ဇန်နဝါရီ 14, 2007 မှာ 11: 07 AM
ကျွန်ုပ်သည် flash ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်ပါ၊ Ashish… သို့သော် သင်သည် သင့်ဘလော့ဂ်သို့ အလိုအလျောက်ပေးပို့သော သို့မဟုတ် သင့် flash ဖိုင်တွင် သင့်ဘလော့ဂ်သို့ လင့်ခ်တစ်ခုပါရှိသည့် splash flash စာမျက်နှာကို သင်သေချာပေါက်တည်ဆောက်ပါ။
ဇန်နဝါရီ 17, 2007 မှာ 11: 41 AM
ဤအရာကို မျှဝေရန် သင်သည် ယောက်ျားလေးတစ်ဦးဖြစ်သည်။
28:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 3, 52